Otú nyefee Photos si iPhoto ka iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4
Otú nyefee foto site na iphoto ka iphone
Ọ bụ nnọọ kasị ụdị transfer na-mere ka iPhone iji a Mac ma ọ bụ PC. Iji jide n'aka na usoro na-aga n'ihu na-enweghị ihe ọ bụla hassle onye ọrụ mkpa ibudata na wụnye ọhụrụ iTunes software nke mere na okwu a bụ nke mgbe chere ihu na onye ọrụ na-aga n'ihu na-enwe ndị kasị mma dị ka atụmatụ nke ọma. Iji mezue usoro ndị onye ọrụ nwere na-eso nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na e kwuru ebe a mere na nyefe-ewe ebe were were.
Nkebi nke 1: eduzi nyefee foto site na iphoto ka iphone
Part 2: Ajụjụ maka transfer foto site na iphoto ka iphone
<Part 3: Otu click iphone foto transfer nyefee photos
1.The iPhone bụ ike jikọọ kọmputa na-amalite usoro na a ire ụtọ n'ụzọ.
2.Mgbe ijikọ ekwentị na iTunes software bụ-oru dị ka ọ bụ isi mma na ina isi nke usoro. Onye ọrụ dịkwa mkpa iji họrọ ngwaọrụ na mgbe ahụ photos site n'aka ekpe panel nke usoro ihe omume.
3.Once foto taabụ a pịrị niile PC ma ọ bụ Mac foto na-jikọrọ ma ọ bụ synced na iTunes ga-egosi n'elu.
4.f bụla kpọmkwem nchekwa bụ na-synced na iPhone onye ọrụ kwesịrị ka họrọ nhọrọ nke "Họrọ nchekwa" wee na-aka họrọ foto site na chọrọ nchekwa na PC ma ọ bụrụ na niile foto na-na-synced mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na nhọrọ nke "All foto na Albums" na-ahọrọ.
5.After onye ọrụ ahọrọ ndị chọrọ nhọrọ ọ bụ-ahụ kwuru na syncing ga-amalite na mgbe imecha onye ọrụ nwere ike ele ọdịnaya na na iPhone enweghị ihe ọ bụla nsogbu.
Nkebi nke 2: FAQ
1 FAQ: m ike nyefee foto ndị si m iphone ka iphoto n'ihi na m na-enweta ihe njehie ozi sị "Error nbudata image". Iphoto apụghị mbubata gị photos n'ihi na e nwere nsogbu na nbudata ihe oyiyi.
Azịza nke ajụjụ a bụ ọrụaka ma maka otu ihe ahụ onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ụfọdụ oru nkọwa nke iPhone na-enweta nke mere na ọ bụghị nanị na nke a na-kpebiri ma onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma na nke a. The nzọụkwụ site nzọụkwụ usoro bụ dị ka ndị.
1.Within Mac mmasị nchekwa onye ọrụ kwesịrị ka ihichapụ iphoto mmasị faịlụ. Faịlụ na-abịa na ndọtị nke com.apple.iphoto.plist.
2.Within na Cache nchekwa e nwere Cache.db faịlụ bụ nke na-ga-ehichapụ.
3.Once na e mere ihe na iphoto foto transfer usoro e kwuru n'elu bụ ndị soro otu ugboro ọzọ iji jide n'aka na usoro a kpebiri.
2 FAQ: Iji kachapụ ma ọ bụ bụghị Iji kachapụ
Mgbe importing oyiyi n'ime iphoto si iPhone, a igbe Pop elu arịọ ma ọ bụrụ na ị ga-amasị ihichapụ Photos on iPhone.
Ọ bụ ihu ọma bụghị onye njehie na niile. Ọ bụ n'ezie na smart arụmọrụ nke Iphoto nakwa dị ka iPhone na-eme ka n'aka na ihe kasị mma na-nyere nakwa dị ka mmezi ohere na-tọhapụrụ. Ọ bụrụ na usoro a na-ele anya dị ka a dum ọ ga-amalite na-eme uche na onye ọrụ ga-aghọta na ọ dị mkpa ka ihichapụ photos na e dị.
1.Once iPhone na jikọọ na PC ma ọ bụ Mac na iphoto achọpụta ekwentị na ya na-eme ka n'aka na ọhụrụ foto na-achọpụtara na dị.
2.Maintaining àgwà na n'ozuzu mkpebi nke oyiyi ha na-dị ka usoro na iphoto ahụ ajụ onye ọrụ ka ihichapụ photos ebe ha kwesịrị họrọ wepụ photos ozugbo.
3.his ga-bụghị naanị ohere iputa igwefoto mpịakọta nke iPhone ma ga-emekwa ka n'aka na a nnukwu ego nke ohere na-tọhapụrụ. Onye ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na nyefe usoro nke iphoto ka iPhone na-soro eme ka ihe niile na foto iPhone na onye ọrụ na-achọ. Usoro a e kwuru ná mmalite nke a nkuzi.
3 FAQ: iPhoto agaghị Mbubata Pictures
Ọ bụ nsogbu na ọnụ ọgụgụ nke ngwọta na ndị ọrụ nwere ike ijide n'aka na onye ọ bụla na onye ọ bụla nke a na-soro na nke a mere na n'ozuzu nke mgbe ihu. -Esonụ bụ ọtụtụ mkpebi na ike ga-etinyere na nke a iji jide n'aka na onye ọrụ mgbe ihu nke a nke ọzọ.
1.The ọtụtụ ọkọlọtọ mkpebi na nke a bụ na a onye ọrụ nwere ike Kwụpụ iPhone si PC. Reboot PC na mgbe ahụ amalite usoro ọzọ. Na ọtụtụ ndị ikpe na-arụ ọrụ ezi enweghị ihe ọ bụla nsogbu na ọ na-ahuta ka ọtụtụ ọkọlọtọ na kacha mkpebi.
2.The onye ọrụ nwere ike imeghe disk njikwa nke na kọmputa na-elele disk arụmọrụ iji jide n'aka na draịvụ ike na-arụ ọrụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
3.Within n'ụlọ nchekwa onye ọrụ nwere ike họrọ ihe osise nile dị na ndị na-dị ka iphoto na mgbe ahụ site na nri na ịpị iphoto isi panel onye ọrụ kwesịrị ka họrọ nhọrọ nke "Gosi ngwugwu ọdịnaya". Ọ ga-egosi niile foto na na-ahọrọ mbubata n'ime ụlọ nchekwa. Onye ọrụ nwere ike mgbe ahụ-akpali foto ndị a na ọnọdụ ọzọ n'ime PC / Mac na-agbalị re-importing ha.
4 FAQ: iphoto-eme akụghịna
Na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị na onye ọrụ nwere ike iso na nke a: 1.The onye ọrụ kwesịrị ka ihichapụ plist faịlụ. Ọ na-anọchi onye ndepụta faịlụ na e dere ozi banyere iphoto na ha na ọnọdụ na usoro. Na ọnọdụ bụ com.apple.iphoto.plist.
2.If n'elu usoro adịghị arụ ọrụ mgbe ahụ onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na cache nkebi na-enweta dị ka cache.db faịlụ na-ehichapụ ime ka software ọrụ. O nwekwara e gosiri n'okpuru.
5 FAQ: iphoto ga na-adịghị aghọta ihu / ebe
Iji nweta mkpebi ọ bụla nke na Filiks na e kpọrọ aha n'okpuru nwere ike etinyere na-arụpụta a ibu ngwa-ngwa n'ụzọ:
1.The onye ọrụ nwere ike ihichapụ foto site na iphoto Ọbá akwụkwọ na mgbe ahụ nwere ike re-mbubata ha na enyemaka nke akpaka ndabere.
2.If niile Filiks-ada onye ọrụ nwere ike họrọ "Automatic Weghachi" nhọrọ iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri.
3.Reinstalling dum software omume ga-enweta ọrụ nsogbu na nke a.
Nkebi nke 3: Otu click iphone foto transfer nyefee photos
Ọ bụkwa otu nke kasị mma atụmatụ nke ọbụna ngwaahịa nke Apple onwe ya enweghị. Ọ bụ ya mere na-atụ aro na nke kacha mma software na nke a nke a na-aha dị ka Wondershare TunesGo Ochie maka Mac. E nwere ọtụtụ uru na ụfọdụ n'ime ha ndị dị ka ndị:
1.The ngwaahịa bụ 100% hack àmà dị ka e nwere ndị mba online usoro dị ka ígwé ojii technology aka.
2.The nyefe nke foto na ụdị batches bụkwa ekwe omume nke na-azọpụta ma na oge na mgbalị nke onye ọrụ.
3.It echebe àgwà n'ihi na onye ọrụ na-eme ka n'aka na-adịghị ọbụna otu pixel a gbanwere mgbe nyefe na-eme ka.
Iji nweta ihe ga-esi na nke kacha mma o kwere omume n'ụzọ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na nke a:
1.The onye ọrụ kwesịrị iji nweta http://www.wondershare.com/mac-ios-manager/ na ibudata na omume si nyere njikọ. Ozugbo arụnyere na interface bụ na-enweta.
2.The ekwentị bụ mgbe ahụ na-jikọọ na PC site eriri USB na-abịa tinyere.
3.On n'elu nke software na tinye button bụ na-pịrị iji jide n'aka na PC na Mac ọnọdụ nke nwere foto na-enweta. Ozugbo ọhụrụ igbe emepe onye ọrụ nwere ike họrọ photos nhọrọ n'okpuru media. Niile foto ndị a ga-dị ndị na-ahọrọ na-emeghe button bụ mgbe ahụ na-kụrụ.
4.At elu nri akuku nke photos akara ngosi onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na Media nchọgharị icon a pịrị na-emeghe iphoto nchekwa na-egosi niile foto nke na-ahụ ịdọrọ na ama esịn ozugbo na foto window mezue nzọụkwụ na usoro.
> Resource> iPhone> Olee mbubata Photos si iPhoto ka iPhone